ဒေါင်းတမာန်: 05/10/2009 - 05/17/2009
Jose Ramos Horta, the East Timorese president and Nobel Peace Prize winner, said he would call on the International Criminal Court to investigate Burma’s military rulers if they did not Ms Suu Kyi.
Singapore and Indonesia joined the condemnation of the arrest. There has been no comment so far from China - now Burma’s most important trading partner.
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Saturday, May 16, 20090comments
WASHINGTON, May 15 (AP) - (Kyodo)—(EDS: INCORPORATING STORY HEADLINED 'OBAMA MAINTAINS U.S. SANCTIONS ON MYANMAR)
President Barack Obama extended U.S. sanctions on Myanmar's military junta Friday as its new crackdown on pro-democracy icon Aung San Suu Kyi triggered broadsides from around the world.
He revealed the extension inaletter to Congress, saying Myanmar's behavior continues to stand in the way of U.S. interests.
"The crisis between the United States and Burma...has not been resolved," Obama said, referring to the country by its previous name.
"These actions and policies are hostile to U.S. interests," he said. "For this reason, I have determined that it is necessary to...maintain in force the sanctions against Burma to respond to this threat."
The United States first imposed sanctions on Myanmar's military junta in 1997 and renewed them several times in view of its repression of democracy activists.
The extension of the sanctions came as Secretary of State Hillary Clinton urged the junta Thursday to immediately release Suu Kyi from detention after she was charged in court in connection with the entry ofaman from the United States into her home last week.
Suu Kyi,aNobel peace laureate, has been under house arrest for more than 12 of the past 20 years, with the junta repeatedly extending her detention.
She led her National League for Democracy party to victory in 1990 but the junta never allowed the election to stand.
"I am deeply troubled by the Burmese government's decision to charge Aung San Suu Kyi forabaseless crime," Clinton told reporters Thursday.
"We call on the Burmese authorities to release her immediately and unconditionally, along with her doctor and the more than 2,100 political prisoners currently being held," she said.
Two key U.S. lawmakers are also urging the junta to release Suu Kyi.
"Aung San Suu Kyi has devoted her life to the peaceful struggle for democracy and freedom for the Burmese people," said Howard Berman, chairman of the House Foreign Affairs Committee, and Ileana Ros- Lehtinen, the ranking member of the same committee.
"The military junta should immediately release her, allow greater political freedoms in the country, and respect the human rights of all of Burma's citizens," they said inajoint statement issued Thursday.
On Thursday, Myanmar authorities moved Suu Kyi from house arrest to prison and the junta charged her with violating the terms of her detention in an apparent effort to extend her detainment, which was to end May 27.
They charged Suu Kyi in connection with an incident last week in whichaU.S. citizen is accused of swimming acrossalake and sneaking into her house to visit her.
Top US senators warn Myanmar over Aung San Suu Kyi
Fri May 15, 10:53 am ET
Top US senators warn Myanmar over Aung San Suu Kyi AFP/File – US Senator John Kerry, seen here on May 05, 2009, and Republican Senator Richard Lugar, have urged Myanmar …
WASHINGTON (AFP) – Two top US senators urged Myanmar to free pro-democracy icon Aung San Suu Kyi and urged "reform-minded" members of its ruling junta to step forward to help forge new ties with the United States.
"Now is the time for reform-minded leaders within the military junta to step forward and be heard," said Democratic Senator John Kerry and Republican Senator Richard Lugar, the top Senate Foreign Relations Committee members.
"Releasing Aung San Suu Kyi and other political prisoners would signal the start ofaconstructive dialogue with the United States," they said inajoint statement.
Myanmar's military rulers were facing intense international pressure to reverse course after the Nobel Peace laureate, 63, was imprisoned ahead ofanew trial next week for breaching the terms of her house arrest.
"The Obama Administration and Congress are reviewing America?s policy toward Burma. At this critical time, some in the junta are trying to leverage the recent alleged unauthorized entry into Aung San Suu Kyi?s compound to extend her detention," said Kerry and Lugar.
The ruling military junta took Aung San Suu Kyi from her home on Thursday to Yangon's notorious Insein prison, where she was charged overabizarre incident in which an American man swam to her lakeside residence.
There was no comment from Myanmar's secretive regime, which has kept the frail opposition leader in detention for most of the last 19 years and now looks set to do so past controversial elections that are due next year.
"This action sends precisely the wrong message to the citizens of Burma, the people of Southeast Asia, and all those in the global community who seek for the Burmese people the opportunity to live inacountry where universal human rights are respected, not trampled," said Kerry and Lugar.
UN expert: Release Myanmar activist Aung San Suu Kyi
Geneva - The United Nations special expert for human rights in Myanmar called Thursday for the "unconditional release" of opposition leader Aung San Suu Kyi. Tomas Ojea Quintana, the special rapporteur, said the detention of Suu Kyi was unlawful, both according to international law and Myanmar's own domestic legislation
The Nobel Peace Prize winner, 63, was charged earlier in the day with allowing an unauthorized US national to visit her Yangon home, where she has been under detention for the past six years.
The UN expert said the opposition leader could not be blamed for the intrusion into her home.
He also said that "all 2,156 prisoners of conscience currently detained by the authorities should be released before the 2010 elections.
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Friday, May 15, 20090comments
ဒီအချိန်ဆို အမေငိုနေရင် ငိုနေလိမ့်မယ်
အမေငိုတဲ့ မျက်ရည် တစက်
အမေ့ရဲ့ မရုန်းနိုင်တဲ့ ခန္တာတခု
နှစ်နဲ့ ချီခံခဲ့ ရပေမယ့် 
အမေ့ ရဲ့ အမည်နာမ ပန်း
မတည်တံ့တဲ့ တရားထဲမှာ အမေအိုသွားခဲ့ ပေမယ့် 
အမေ့ရဲ့ဗမာပြည်အပေါ် ထားရှိတဲ့ ဆန္ဒ
အနိုင် နဲ့ အရှုံးတရား
နှစ်ခုရဲ့ရေချိန် မညီမျှမှု မှာ
အမေဟာ လက်နက်ပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့ 
မနာလိုသူတွေရဲ့ရက်ရက်စက်စက် အချိန်ခံထားရပေမယ့်
အမေ့ ရဲ့ နုတ်ခမ်းစွန်းကအပြုံးတစက်
မိစ္ဆာတွေရဲ့ လက်နက်ထက် စွန်းထက်ပါတယ်အမေ။
နောက်ဆုံးသူတို့ သိပ်မုန်းနေခဲ့ ရင်တောင်ပေါ့။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Thursday, May 14, 20090comments
အထိန်းသိမ်းခံ J.W. Yeattaw အား ရန်ကုန် US သံရုံးအရာရှိတွေ့ဆုံခွင့်ရ
US consul meets American detained in Myanmar
YANGON, Myanmar – Myanmar authorities allowedaU.S. diplomat to visit an American arrested last week for swimming acrossalake to sneak into the home of detained democracy leader Aung San Suu Kyi, according toastate television report Wednesday.
Myanmar state television showedastill photo of John William Yettaw meeting with consular chief Colin Furst. A U.S. diplomat confirmed the meeting, saying it lasted 30 minutes and that Yettaw appeared to be in good spirits and said he had been treated well.
The diplomat, who insisted on anonymity because he is not authorized to speak to the press, said that Yettaw had not yet been formally charged with any crime. He did not elaborate, calling the issue sensitive.
It was the first timeaU.S. Embassy official had access to Yettaw since he was arrested May6after allegedly staying secretly for two days at Suu Kyi's house.
Suu Kyi's supporters fear that Yettaw's reported stay could put her in legal jeopardy. Her personal doctor, one of the only people allowed to visit her onaregular basis, was detained last Thursday for no publicly announced reason.
She has been in detention for 13 of the last 19 years — including the past six — without trial for her nonviolent promotion of democracy despite international pressure for her release.
Myanmar's state-run newspapers reported last week that Yettaw, 53, of Falcon, Missouri, swam about 1 1/4 miles (2 kilometers) on the night of May3to the lakeside home of the 63-year-old Suu Kyi and left the same way on the night of May 5, before being arrested the next morning. The report said his motive was under investigation.
One of many strict rules Myanmar's military government imposes on citizens is that they must notify local officials about any overnight visitor who is notafamily member. The law also states that foreigners are not allowed to spend the night atalocal's home.
၁၂ မေ ၂၀၀၉
မြန်မာပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ရေးလုပ်အောင် အမေရိကန်က ဒဏ်ခတ်အရေးယူနေတာ မထိရောက်တဲ့အတွက် အိုဘားမားအစိုးရက ပြန်လည်သုံးသပ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆီးနိတ်အထက်လွှတ်တော်ကလည်း ပြန်လည် ဆန်းစစ်နေပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ ပြန့်ပွားရေးဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး လမ်းစဉ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတခုဖြစ်လာတာ အနှစ် (၃၀) လောက်ရှိ ပါပြီ။ ဒီမိုကရေစီမြှင့်တင်ရေးအတွက် နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း များစွာ အကုန်ခံနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကုန်သွယ်တာမျိုးမဟုတ်တဲ့ အတွက် ရည်ရွယ်ချက် ဘယ်လောက်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းရခက်ပါ တယ်။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဈေးကွက်လွတ်လပ်မှုဟာ အပြန်အလှန်အကျိုးပြုနေတာမို့ လွတ်လပ်တဲ့ဈေးကွက်နဲ့ နိုင်ငံရေး လွတ်လပ်မှုရှိတဲ့ တိုင်းပြည်ဟာ အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ဘက် ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆပါပဲ။
အလွန်အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ အိုဘားမားအစိုးရဟာ ဒီမိုကရေစီမြှင့်တင်ရေးကိစ္စကို မကိုင်နိုင်သေးတဲ့အတွက် အကြံဉာဏ်ပေးမှုတွေ တောင်ပုံရာပုံ ဖြစ်လာတာတွေ့ရတယ်။ သမိုင်းကိုကြည့်ရင် ဒီမိုကရေစီမြှင့်တင်ရေးလုပ်ရာမှာ အမေရိကန်အစိုးရတွေဟာ နည်း (၄) မျိုး သုံးပါတယ်။ ပထမနည်းလမ်းက သံတမန်လမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီး အသုံးအများဆုံးပါပဲ။ ဒီမိုကရေစီမြှင့်တင်တဲ့ အစိုးရကို ချီးကျူးပြီး ဆန့်ကျင်တဲ့အစိုးရကို ဝေဖန်ရှုတ်ချပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီဆန့်ကျင်မှုများလာရင် သံတမန်အဆင့် လျော့ချပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ သံအမတ်မထားဘဲ သံမှူးပဲ ထားတာဟာ သံတမန်နည်းအရ အရေးယူတာပါ။
ဒုတိယနည်းက ဒီမိုကရေစီမြှင့်တင်ရင် ဆုပေးပြီး ဆန့်ကျင်ရင် ဒဏ်ပေးတဲ့နည်းပါပဲ။ ဒီမိုကရေစီအခြေအနေကောင်း ရင် ကူညီထောက်ပံ့ပြီး မကောင်းရင် ဒဏ်ခတ်အရေးယူပါတယ်။ မြန်မာအပါအ၀င် နိုင်ငံအချို့ကို အမေရိကန်က ဒဏ်ခတ်အရေးယူထားပါတယ်။ စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်အရေးယူတာဟာ ဒီမိုကရေစီကို မြှင့်တင်ရာမရောက်ဘဲ ကုန်သွယ်ရေးကသာ မြှင့်တင်ရာရောက်တယ်လို့ ယုံကြည်သူလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူအခွင့်အရေး မလေးစားတဲ့တရုတ်ကို အမေရိကန်က ဒဏ်မခတ်ဘဲ ကူးသန်းရောင်းဝယ်နေပေမယ့် တရုတ်ပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီ ရှင်သန်မယ့် အရိပ်လက္ခဏာ မမြင်ရသေးပါဘူး။
ဒီမိုကရေစီမြှင့်တင်တဲ့ တတိယနည်းကတော့ စစ်ရေးအရ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ကာ အာဏာရှင်အစိုးရကို ဖြုတ်ချပြီး ရွေးကောက်တင်မြှေက်တဲ့ အစိုးရစနစ်ကို တည်ထောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ စွက်ဖက်ရတဲ့ အခြားအကြောင်းရင်းတွေ ရှိပေမယ့် လူကြားကောင်းအောင် ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် စွက်ဖက်တာလို့ ဆင်ခြေပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်မှာ ရှုံးနိမ့်သွားတဲ့ နာဇီဂျာမဏီနဲ့ ဖက်ဆစ်ဂျပန်မှာ အမေရိကန်ချပေးတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အောင်မြင်စွာ ကျင့်သုံးနိုင်တာကို ထောက်ပြပြီး စစ်တိုက်ပြီး ဒီမိုကရေစီစနစ် အကောင်အထည်ဖော်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆ ပေါ်ထွက်လာတာပါ။ အီရတ်နဲ့ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာလည်း စစ်ဆင်ပြီး ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်တယ်လို့ ဆိုပေမယ့် မအောင်မြင်သေးပါဘူး။ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လက်တွေ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရလဒ် ခြားနားတတ်တာကို သက်သေပြနေပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီမြှင့်တင်ရေးမှာ အသုံးအများဆုံးနည်းဟာ ဒီမိုကရေစီကို ပြုစုပျိုးထောင်နေကြတဲ့ အရပ်သားအသင်းအဖွဲ့ တွေကို အကူအညီပေးတဲ့နည်းပါပဲ။ ဒါကို စတုတ္ထနည်းလို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းကို အမေရိကန်နဲ့ အနောက်ဥရောပက အများဆုံး သုံးပါတယ်။ မြန်မာပြည် နယ်စပ်ဒေသမှာ အခြေစိုက်ကြတဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးရာအဖွဲ့ အစည်းတွေဟာ အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပရဲ့ ကူညီမှုကို ရကြတာများတယ်။ နိုင်ငံခြားဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကို အမေရိကန်အစိုးရ အကူအညီပေးပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန်အစိုးရအမှုထမ်းဟောင်း တောမတ်စ်-ခရုသာ့စ် Thomas Carothers က လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်က ကျမ်းတစောင်ပြုစုဖူးတယ်။ အခုတော့ သူ့စာအုပ်ဟာ ဒီမိုကရေစီ မြှင့်တင်ရေး လက်စွဲကျမ်းဖြစ်နေပါပြီ။
အမေရိကန်က ကူညီထောက်ပံ့တိုင်း ဒီမိုကရေစီစနစ် ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်တာမဟုတ်ပေမယ့် ရေရှည်စီမံကိန်းအနေနဲ့ အမေရိကန်အစိုးရအဆက်ဆက် ကြိုးပမ်းမယ့်လုပ်ငန်းဖြစ်နေ ပါတယ်။ ဗမာစစ်အစိုးရကလည်း အမေရိကန်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီမြှင့်တင် တဲ့ နိုင်ငံခြားရေးလမ်းစဉ်ကို ဝေဖန်ရှုတ်ချလေ့ရှိပါတယ်။ မြန်မာ-အမေရိကန် ဆက်ဆံရေးသမိုင်း “အကြောင်းအကျိုးအကောင်း အဆိုး” ပကတိ ဖြစ်စဉ်များဆိုတဲ့ အမေရိကန်ဆန့်ကျင်ရေး စာအုပ်ကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်က ထုတ်ဝေတယ်။ ဒါပေမယ့် နအဖထုံးစံ အတိုင်း စာရေးသူအမည်ကို မဖော်ရဲလို့ လေ့လာသူတဦးလို့သာ ဖော်ပြတယ်။ ဗမာစစ်အစိုးရဘက်က ထောက်ခံပြီး ရေးသားသူတွေ ဟာ ကိုယ့်နာမည်ကို မဖော်ပြရဲတာကြောင့် နာမည်ဝှက်နဲ့ ရေးကြတာများတယ်။ ဒါကိုကြည့်ရင် စစ်အစိုးရလုပ်ရပ်ကို မယုံကြည်ဘဲ ညာစားနေတာ ထင်ရှားတယ်။
ဒီမိုကရေစီမြှင့်တင်ရေးမှာ အရပ်သားအဖွဲ့အစည်း ရှင်သန်ဖို့ လိုအပ်တာကြောင့် ဒီအသင်းအဖွဲ့တွေကို အမေရိကန်က ကူညီထောက်ပံ့တယ်။ အနောက်တိုင်းဒီမိုကရေစီသဘော တရားဝင်လာရင် အစိုးရ အာဏာစက် ကျဆင်းလာမှာကို အာဏာရှင်ဓလေ့ကြီးမားတဲ့ ရုရှားအစိုးရက လက်မခံဘူး။ ဥဇဗက်ကစ္စတန်၊ ဘီလာရုစ်၊ တာဂျစ်ကစ္စတန်၊ ခါဇတ်စတန် စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်း ဒီမိုကရေစီမြှင့်တင်ရေးအတွက် အနောက်တိုင်းကူညီတာကို အစိုးရတွေက မလိုလားကြဘူး။
ဆိုဗီယက်အုပ်စုဝင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အရှေ့ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာ ဒီမိုကရေစီမြှင့်တင်ဖို့ အမေရိကန်ကူညီတာကို တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီက အကြီးအကျယ် ဝေဖန်ရှုတ်ချခဲ့တယ်။ တရုတ်နဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာ ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေးတွေ ပေါ်မလာအောင် ၂၀၀၅ မှာ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီက မဟာဗျူဟာချမှတ်တယ်လို့ သိရတယ်။ နိုင်ငံခြားအကူအညီယူတဲ့ အရပ်သားအသင်းအဖွဲ့တွေကိုလည်း ချုပ်ချယ်ကန့်သတ်လာတယ်။ အင်အားမရှိတဲ့ အရပ်သားအသင်းအဖွဲ့လေးတွေကို ဒီမိုကရေစီသင်တန်းပေးပြီး ကူညီထောက်ပံ့တာကို အာဏာရှင်အစိုးရတွေက ကြောက်လန့်ပြီး တိုင်းပြည် မငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင် သွေးထိုးပေးနေပါတယ်လို့ စွပ်စွဲတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ တိုင်းသူပြည်သားတွေ ဒီမိုကရေစီသဘောတရား နားလည်သွားမှာကိုကြောက်လန့်ပြီး စွပ်စွဲတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါ တယ်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း တိုင်းသူပြည်သားကို ဖိနှိပ်ချင်လို့ အကြောင်းရှာပြီး တမင်တကာစွပ်စွဲတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် (၃၀) ကျော်နဲ့ ယှဉ်ကြည့်ရင် ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံ တိုးပွားလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံပေါင်း (၄၀) ကျော်ကနေ (၁၀၀) ကျော်အထိ တိုးပွားလာပါတယ်။ လွတ်လပ်တဲ့ နိုင်ငံတွေထဲမှာ (၆၀) ရာခိုင်နှုန်းဟာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေ ဖြစ်နေပါပြီ။ ရေခံမြေခံကောင်းတဲ့ နိုင်ငံအားလုံးမှာ ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးနေပြီ ဖြစ်လို့ အခြေခံမကောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ ဒီမိုကရေစီအသွင်းကူးပြောင်းဖို့သာ ကျန်တော့တယ်။
ဒီမိုကရေစီမြှင့်တင်ရေးအတွက် သံတမန်နည်း၊ စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်နည်း၊ စစ်ရေးအရ စွက်ဖက်နည်း၊ ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူကို ကူညီတဲ့နည်း၊ နည်းလမ်းတွေကို သုံးတာတောင် တိုင်းပြည်ရဲ့ လူမှုစီးပွားရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေခံကို ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲတဲ့။ ဒီမိုကရေစီပျိုးထောင်ရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ အခြေခံကို နိုင်ငံခြားက ဖန်တီးပေးနိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရှိပြီးသားအရပ်သား အသင်းအဖွဲ့တွေကိုသာ ပိုပြီး အားကောင်းအောင်၊ ကျွမ်းကျင် အောင် နိုင်ငံခြားက ကူညီနိုင်ပါတယ်။
KNU နှင့် တိုက်ပွဲတွင် ဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်ရှိသူ တဦး ကျဆုံးဟု ဆို
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ မေလ 13 2009 13:54 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးနှင့် တိုက်ပွဲတွင် ကျဆုံးသွားသည်ဟု ဆိုသော မြန်မာစစ်တပ်မှ အဆင့်မြင့် အရာရှိတဦး၏ ရုပ်အလောင်းကို ယနေ့တွင် သင်္ဂြိုဟ်မည် ဖြစ်သည်။
ပဲခူးတိုင်း သံတောင်မြို့နယ် ဘောကလိကျေးရွာ အုပ်စုမှ အမှတ် ၅ စစ်ဆင်ရေးနှင့် ကွပ်ကဲရေး ဌာနချုပ်မှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ကောင်းမြတ်သည် မေလ ၁၁ ရက်နေ့က ကရင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်နှင့် ဖြစ်ပွားသော တိုက်ပွဲတွင် ကွယ်လွန်သွားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ကေအန်ယူက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားသည်။
ကေအန်ယူမှ အတွင်းရေးမှူး (၁) ဗိုလ်မှူး စောလှငွေက ဗိုလ်မှူးချုပ် ကောင်းမြတ်သည် ၎င်းတို့ တပ်နှင့် တိုက်ပွဲတွင် ကျဆုံးသွားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရက တိုက်ပွဲသတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်သေးခြင်း မရှိသေးဘဲ ဗိုလ်မှူးချုပ် ကောင်းမြတ်၏ နာရေးကြော်ငြာကိုသာ ယနေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ သတင်းစာက မည်သည့် နေရာတွင် သဂြုင်္ိဟ်မည်ကို ဖော်ပြခြင်း မရှိသော်လည်း သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် အိမ်တွင် ဆွမ်းကျွေးမည်ဟု သိရသည်။
ကြည်း-၂၆၈၀၁ စစ်တက္ကသိုလ် အမှတ်စဉ် ၂၃ ဆင်း အသက် ၄၉ နှစ် အရွယ် ဗိုလ်မှူးချုပ် ကောင်းမြတ်သည် မန္တလေးမြို့နေ ဗိုလ်ကြီးခင်လှ၏ တတိယမြောက် သားဖြစ်ပြီး၊ ကလေး ၂ ဦး၏ ဖခင်ဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင် သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ် ကံ့ကော်ရိပ်သာလမ်း အမှတ် ၂၀၉ တွင် နေထိုင်သည့် ဇနီးသည် ဒေါ်ခင်ထွေးနှင့် သားဖြစ်သူ မောင်ကောင်းကျော်မြတ်၊ သမီး မလှမြတ်နိုးတို့ ကျန်ရစ်ခဲ့သည် ။
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ မှကူးယူ သိမ်းဆည်းပါသည်)
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေအိမ်ဝင်းထဲကို ရေကူး
၀င်ရောက်တဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံသားတဦးကို ဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ
ထွက်ပေါ်နေချိန်မှာပဲ မြန်မာစစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်တွေက အမေရိကန်သတင်းထောက်
၂ ဦးကိုလည်း နိုင်ငံက နှင်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အမေရိကန်စင်တာက စီစဉ်တဲ့
စာနယ်ဇင်းသင်တန်းတခုကို ပို့ချအပြီး သူတို့ ၂ ဦးကို မန္တလေးမြို့မှာ အာဏာပိုင်တွေက
ထိန်းသိမ်းပြီး နိုင်ငံက ထွက်ခွာခိုင်းခဲ့တာပါ။ အကြောင်းစုံကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းထားတဲ့
မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း မန္တလေးမြို့မှာ ဒေသခံ သတင်းသမားတချို့အတွက် စာနယ်ဇင်း
သင်တန်း ပေးခဲ့ကြတဲ့ အမေရိကန် ဓာတ်ပုံသတင်းထောက် တဦးဖြစ်တဲ့ ဂျယ်ရီ
ရက်ဒ်ဖန်း (Jerry Redfern) နဲ့ ဇနီးသည်ဖြစ်သူ ကာရန်း ကုတ်စ် (Karen Coates) တို့
၂ ဦးကို အာဏာပိုင်တွေက နိုင်ငံတွင်းကနေ မောင်းနှင်ထုတ်ခဲ့တာပါ။ မန္တလေးမြို့မှာ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က သူတို့ ၂ ဦးကို ထိန်းသိမ်းပြီး ချက်ချင်းဆိုသလို နောက်တနေ့ပဲ ရန်ကုန်မြို့
ကတဆင့် နိုင်ငံကနေ ထွက်ခွာခိုင်းခဲ့တာလို့ အခုအခါ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ကို
ပြန်ရောက်နေတဲ့ သူတို့ ၂ ဦးက ကြေညာချက်တစောင် ထုတ်ပြန်ပြီး ပြောလိုက်ပါ
တယ်။ ဘာအကြောင်းကြောင့်ဆိုတာ အာဏာပိုင်တွေဘက်က ရှင်းမပြပေမယ့်
သူတို့ကို အစိုးရရုံးစိုက်ရာ နေပြည်တော်က တိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားချက်အရ ဆိုပြီးတော့
သာ ပြောတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
တကယ်တော့ မန္တလေးမြို့မှာ အမေရိကန်စင်တာက စီစဉ်တဲ့ စာနယ်ဇင်းသင်တန်း
ပေးနေချိန် အထူးရဲတပ်ဖွဲ့က လာပြီး အကဲခတ်တာတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့် အစောပိုင်းမှာ
တစုံတရာ အနှောင့်အယှက်ပေးတာ မရှိခဲ့ဘူးလို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း
သင်တန်းအပြီး ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညပိုင်းကျမှ ပစ္စည်းတွေသိမ်းဖို့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး
အရာရှိတွေက လာပြီးညွှန်ကြားခဲ့တယ်၊ အဲဒီနောက် ရန်ကုန်ကို ရထားနဲ့ ချက်ချင်း
ဆိုသလို ခေါ်သွားပြီး လေယာဉ်ပေါ် တင်ပေးခဲ့တာလို့လည်း သူတို့က ပြောပါတယ်။
သူတို့ ၂ ဦးအနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်န၀ါရီလတုန်းကလည်း အလားတူ သင်တန်းတွေ ပို့ချ
ဘူးပြီးတော့ ဒီတကြိမ်မှာလည်း မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ ဆင်ဆာအဖွဲ့နဲ့ အထူးရဲတပ်ဖွဲ့တို့
ကလည်း လက်ခံထားပြီးသားလို့ ဆိုပါတယ်။
သတင်းလုပ်ငန်းအတွက် အခုလို ရောက်လာပေမယ့်လို့ စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိတဲ့
နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အနေနဲ့ကတော့ စာနယ်ဇင်း
သမားတွေကို လက်ခံလေ့ သိပ်မရှိဘူးလို့လည်း အခုအဖြစ်အပျက်နဲ့ ပတ်သက်လို့
မြန်မာနိုင်ငံက စာနယ်ဇင်းသမားတဦးက မှတ်ချက်ပေးပါတယ်။
“ဘာပြဿနာဖြစ်လဲတော့ မသိရဘူး။ ကျနော်သိသလောက် ဒီဆရာလင်မယားကတော့
အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။ သူတို့တည်းတဲ့ မန္တလေးစီးတီးဟိုတယ်ကို ည ၉ နာရီလောက်
လာခေါ်သွားပြီး ညတွင်းချင်းပဲ ရထားနဲ့ ရန်ကုန်ကိုလိုက်ပို့တယ်။ အမှန်က သူတို့က
နောက်တရက်မှပြန်ရမှာ။ အဲဒါကို လက်မခံဘဲ ခေါ်သွားတာ။ ဒီမှာက ဂျာနယ်လစ်တွေ
ဆို သိပ်ပေးဝင်တာမှ မဟုတ်တာ။”
မြန်မာနိုင်ငံက စာနယ်ဇင်းသမားတဦး ပြောပြသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုအဖြစ်အပျက်ဟာဆိုရင် အမေရိကန် နိုင်ငံသားတဦး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
နေအိမ်ကို ဥပဒေမဲ့ ၀င်ရောက်ခဲ့လို့ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာတွေ လုပ်နေတယ်ဆိုပြီး
မြန်မာစစ်အစိုးရက ပြောဆိုထားချိန်နဲ့လည်း တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။
နိုင်ငံက ပြန်လည်ထွက်ခွာလာကြရတဲ့ သတင်းစာသမား ၂ ဦးကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်း
စုကြည် နေအိမ်ဝင်းထဲက ဖြစ်ရပ်ရဲ့ အကျိုးဆက် ဖြစ်ကောင်းလည်း ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့
ဆိုပေမယ့် တကယ့်အကြောင်းရင်းမှန်ကို သူတို့အနေနဲ့ ဘယ်လိုမှ သိခွင့်မရခဲ့ဘူးလို့
လည်း ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ သူတို့ ၂ ဦးရဲ့ အဖြစ်အပျက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ရော
ဘာအကြောင်းကြောင့် အခုလို ထွက်ခွာခိုင်းရတယ် ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ရော
အာဏာပိုင်တွေဘက်က တစုံတရာ ပြောတာဆိုတာမျိုးတော့ မကြားရပါဘူး။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Wednesday, May 13, 20090comments
ကုန်စိမ်းဈေးတန်းမှ မိန်းမကြီးကဲ့ သို့ကလိမ်ကကျစ် များတတ်သော အမျိုးယုတ်အစိုးရဟူသည်
ကိုဒီရေ ဘလော့ခ် မှကူးယူတင်ပြပါသည် ခင်မျာ။
If you do not smoke we are going to charge ,it's Burma
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Monday, May 11, 20090comments
မြန်မာဗိုလ်ချုပ်ကြီးများက ရှေ့နှစ်ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ ငြိမ်းချမ်းရေး ယူထားသည့် သူပုန်အဖွဲ့များကို လက်နက်ဖြုတ်ရန် သို့မဟုတ် ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့အဖြစ် အသွင်ပြောင်းရန် ညှိနှိုင်းနေချိန်တွင် ထိုသို့ ပြောလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“မြန်မာပြည် အနာဂတ်အတွက် သင့်လျော်တဲ့ လမ်းပြမြေပုံ မရှိသေးဘူး” ဟု ဗိုလ်ချုပ် Gam Shawng Gunhtang က ပြောသည်။ သူသည် ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၏ စစ်ဦးစီးချုပ် ဖြစ်သည်။
“ကျုပ်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေက ဖယ်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုအတွက် ကြိုးစားနေကြတာ။ သူတို့က ဒီအကြောင်း နားထောင်ချင်ကြတာ မဟုတ်ဘူး” ဟု ဗိုလ်ချုပ် Gam Shawng Gunhtang က ပြောသည်။
လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရန် တောင်းဆိုချက်ကို “လက်မခံနိုင်” ဟု သူက ဆိုသည်။
KIA အရာရှိတဦးကလည်း စစ်အစိုးရ၏ ကမ်းလှမ်းချက်ကို သဘောမတူဟု ပြောသည်။
“တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်ဖြစ် မဖြစ်ဖြစ် ငါတို့ကတော့ အသင့် ပြင်ထားရမှာပဲ။ ငါတို့ တပ် အင်အားကောင်းမယ်ဆိုရင်၊ ငါတို့ ငြိမ်းချမ်းရေးက ရေရှည် ခိုင်မြဲမှာပဲ” ဟု ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်းအုပ် ဗိုလ်မှူး Zauja Nhkri က ပြောသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီမှ ဗိုလ်မှူးတဦး KNU ထံ ပြန်လည်ရောက်ရှိ
Thursday, 07 May 2009 21:16 ဖြိုးကြီး
ဗိုလ်ချုပ်စောထင်မောင်ဦးဆောင်သည့်ကရင်ခွဲထွက်အဖွဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ တပ်ရင်း (၇၀၄) မှ ဒုတပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်မှူး စောလေးမူး မိသားစုဝင်များနှင့်အတူ KNU အဖွဲ့သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည်။
စစ်အစိုးရ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့များအပေါ် ထားရှိသည့် သဘောထားကို မယုံကြည့်ရတော့သည့်အပြင် ၂၀၁၀ နောက်ပိုင်း နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ပြီးပါက မိမိလူမျိုးနှင့် ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးအတွက် အာမခံချက်မရှိတော့သည့်အတွက် ယခုလ (၄) ရက်နေ့က ကေအန်အဲလ်အေ တပ်မဟာ (၇) သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီမှ KNU သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည့် ဗိုလ်မှူး စောလေးမူး
“ကျနော်တို့ရပ်တည်ဖို့ အာမခံချက်မရှိဘူး၊ သူတို့ခိုင်းတာပဲ အကုန်လုပ်ရမှာ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်တယ်ဆိုတာက ကိုယ့်အမျိုးသားတွေအတွက် ငြိမ်းချမ်းဖို့လုပ်တာဆိုပြီး အဖိုးထင်မောင်ပြောတာ၊ အခုတော့ ကျနော်တို့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ခိုင်းတာလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ ကျနော်တို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တခြားဖြစ်သွားမယ်၊ အဲဒါကြောင့်မို့ ကျနော်ထွက်လာခဲ့တာ” ဟု ဗိုလ်မှူး စောလေးမူးက ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့်လ (၂၈) ရက်နေ့က ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီအဖွဲ့များကို နအဖအာဏာပိုင်များက ဖားအံမြို့တွင် ခေါ်ယူကာ အသက်ကြီးသူများကို ပါတီဖွဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခိုင်းပြီး ကျန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို အင်းအားလျော့ချကာ နယ်ခြားစောင့်တပ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီး ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လက်အောက်တွင် ထားရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုဖိအားပေးခဲ့သည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
လက်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်များ အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ “၂၀၁၀ ပြီးရင် တပ်တွေကိုပြန်ဖွဲ့စည်းပြီး နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် ထားမယ်၊ နအဖတပ်လို နေရမယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော့်လူတွေ တယောက်မှ ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး၊ ပါတီဖွဲ့ဖို့ကလဲ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ထဲမှာ ပါတီဖွဲ့နိုင်လောက်တဲ့သူ တယောက်မှမမြင်ဘူး၊ အဖိုးထိန်မောင်ဆိုရင်လဲ အသက်ကကြီးလာပြီး သူ ပါတီထောင်ပြီး ဘယ်လို ရွေးကောက်ပွဲဝင်နိုင်မလဲ” ဟု ပြောသည်။
နအဖစစ်အစိုးရအနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ဝင်များအပေါ်ထားရှိသည့် သဘောထားနှင့်ပတ်သက်၍လည်း “တစုံလုံအတိုင်းအတာပြောရရင် ကျနော်တို့ လူထုတွေနစ်နာတာပဲရှိတယ်၊ နအဖလုပ်ရပ်သာ အောင်မြင်ရင် တိုင်းသူပြည်သားတွေ ပိုပြီး နစ်နာမှာပါ၊ အားလုံးအခြေအနေက ပရုပ်လုံးလို လုံးပါးပါးသွားမှာပဲ၊ သူတို့ပြောတဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာလဲ တိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက် ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး၊ လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေ အားလုံးဟာ ၂၀၁၀ ပြီးရင် အားလုံးပျက်သုဉ်းသွားမှာပါ” ဟု ပြောသည်။
နအဖမီဒီယာများက ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့များမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူများကို KNU မှ သတ်ဖြတ်ပစ်ကြောင်း ပြောဆိုနေခြင်းသည် လိမ်လည်မှုများသာဖြစ်ပြီး တကယ်တမ်းလက်တွေ့တွင် နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုဆက်ဆံကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
“သူတို့ပြောတာ တခြားစီပါဗျာ၊ သူတို့သတင်းမှားတယ်ဆိုတာ ကျနော်ကိုယ်တိုင် ကြုံနေရပြီ၊ ကျနော် အေးအေးဆေးဆေးပဲ လက်ထိပ်ခတ်တာတောင် မရှိဘူး၊ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုတယ်၊ စားဖို့သောက်ဖို့ကအစ သူတို့လုပ်ပေးတယ်၊ အခုလိုပြောတာကလဲ ဘယ်သူမှ ဖိအားပေးလို့မဟုတ်ဘူး၊ နအဖမီဒီယာတွေက သတင်းအမှားတွေပဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျနော် ပြောချင်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိ ဗိုလ်ချုပ်ထင်မောင်ဦးစီးသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီတွင် တပ်ရင်း ၉ ရင်းနှင့် အထူးတပ်ရင်း ၁ ရင်း ထားရှိကာ လက်နက်ကိုင်အင်အား ၃၀၀ ဝန်းကျင်သာရှိကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
လက်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီတွင် ကျန်ရစ်ခဲ့သူများကို ၎င်းအနေဖြင့် “ကျနော့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို မှာချင်တာက အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို အားလုံးသိတဲ့အတွက် ခြေမကျွံခင် ပြန်လာခဲ့ကြပါလို့ မှာချင်တယ်၊ ရှေ့လှမ်းရမှာကလဲ ချောက်ကမ်းပါးပဲဆိုတာကို သိလျှက်နဲ့ ဆက်မမှားစေချင်တော့ဘူး၊ မိခင် KNU ရဲ့ရင်ခွင်ကို ပြန်လာဖို့ ပြောချင်ပါတယ်” ဟု ဗိုလ်မှူး စောလေးမူးက တိုက်တွန်းပြောဆိုသည်။
ဗိုလ်မှူးစောလေးမူး မိခင် KNU သို့ ၎င်း၏မိသားစုဝင် ၄ ဦးနှင့်အတူ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည့်အပေါ် တပ်မဟာ (၇) တပ်မဟာမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဂျော်နီက “ဟိုမှာနေလို့ အခြေအနေမကောင်းတော့ဘူး၊ အများအတွက် အမျိုးသားအတွက် အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာကို သိလို့ ပြန်လာတာ၊ သူ့မိသားစုတွေရော အရင်ကအတိုင်း အေးအေးဆေးဆေး ပြန်လာနေပါ နွေးထွေးစွာပဲ ကြိုဆိုပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Sunday, May 10, 20090comments
Terrorist government more abused on Aung San Suu kyi
ဒေါ်စု ကျန်းမာရေး မကောင်း၊ ဆရာဝန်လည်း အဖမ်းခံရ
Saturday, 09 May 2009 18:22 ဇာနည်ဝင်း
Correspondents in Rangoon | May 10, 2008
THE Burmese junta last night seized all the relief aid the UN World Food Program had flown into the country even as survivors of Cyclone Nargis waited for food, shelter and medicine.
The move by Burma's generals left the WFP with no choice but to suspend the aid operation, already staggering under the obstruction of the regime.
WFP spokesman Paul Risley said last night that all "the food aid and equipment that we managed to get in has been confiscated". The shipment included 38 tonnes of high-energy biscuits. Mr Risley said it was not clear why the material was seized, but he had earlier blasted the junta, saying its refusal to let in foreign aid workers was "unprecedented" in the history of humanitarian work.
While the junta dithered and appeared overwhelmed by the disaster - the worst in the country's recorded history - more thanamillion homeless people waited for food, shelter and medicine, many crammed in Buddhist monasteries or camped in the open.
The junta said yesterday it was grateful for international assistance, which has included 11 chartered planes loaded with aid supplies. But the best way to help was to send in material rather than personnel.
It said one UN relief flight from Qatar was sent back after landing in Rangoon on Thursday because it carriedasearch-and-rescue team and media who did not have permission to enter the country.
More than 62,000 people are known to have died or are missing from Nargis, which hit the country's Irrawaddy Delta last Saturday. Shari Villarosa, who heads the US embassy in Rangoon, said the number of dead could eventually exceed 100,000 because of illnesses. Health experts are now scrambling to prevent the spread of diseases such as malaria, with outbreaks already surfacing in areas hardest hit. Early estimates indicate 20 per cent of children in the most devastated areas are suffering from diarrhoea, and the situation could worsen, said Osamu Kunii, UNICEF's chief of health and nutrition in Burma.
The isolationist regime has refused to grant visas to foreign aid workers who could assess the extent of the disaster and manage the logistics. Mr Risley said earlier the organisation had submitted 10 visa applications around the world, including six in Bangkok, but none has been approved.
Even if the Government changes its mind, there is no hope of getting any visas in Bangkok until Monday becauseaThai holiday yesterday shut the Burmese embassy, he said.
"The frustration caused by what appears to beapaperwork delay is unprecedented in modern humanitarian relief efforts," Mr Risley said.
But there was no sign the junta was relenting. "Myanmar has prioritised receiving emergency relief provisions and making strenuous effort delivering it with its own labour to the affected areas,"astatement by the junta said. "(But) Myanmar is not ready to receive rescue and media teams from foreign countries."
Critical aid and experts are poised in neighbouring Thailand and elsewhere to rush into one of the world's poorest nations.
Burma has also snubbedaUS offer to help. The US has ruled out conducting aerial food drops without the junta's permission, after calls for the international community to proceed with the relief effort regardless of Burma's position. But US Defence Secretary Robert Gates said Washington was "prepared to help ... and it would beatragedy if these assets" were not used.
It is not clear how much aid will reach the Irrawaddy Delta where entire villages have been submerged with bodies floating in salty water and children ripped from their parents arms.
By rejecting US aid, the junta is refusing to take advantage of Washington's enormous ability to deliver aid quickly, which was evident during the 2004 tsunami.
Burma's detained pro-democracy leader Aung San Suu Kyi (file photo)
Ms Suu Kyi's latest detention is due to expire at the end of May
Burma's detained opposition leader Aung San Suu Kyi is suffering from low blood pressure and dehydration and is barely eating, her party spokesman says.
Nyan Win said they were extremely worried about the 63-year-old Nobel Laureate's health.
A medical assistant has placed Ms Suu Kyi on an intravenous drip. Her own doctor was reportedly detained after visiting her earlier this week.
Ms Suu Kyi She has been under almost permanent house arrest since 1990.
It followed the victory of her National League for Democracy (NLD) inageneral election in 1990. The junta has refused to allow the party to assume power.
Ms Suu Kyi's latest period of detention is due to expire at the end of May but the authorities have not yet said if it will be extended.
"We are very concerned about her health and security conditions," Nyan Win of the NLD told the BBC.
He said Ms Suu Kyi had sufferedaloss of appetite and had gone three to four days without eating.
Asaresult, her blood pressure had dropped and she was showing symptoms of dehydration.
Burmese opposition leader Aung San Suu Kyi's house in Rangoon, Burma (file image)
An intruder broke into Ms Suu Kyi's off-limits compoundaweek ago
Nyan Win said the party was closely monitoring the situation, and would decide next week whether to press for greater medical treatment for Ms Suu Kyi.
Nyan Win said it was not clear why physician Tin Myo Win had been arrested last Thursday.
He speculated that it could be linked to the arrest on Tuesday ofaman carryingaUS passport who swam acrossalake to the property.
About 20 police are reported to have entered Ms Suu Kyi's house on Thursday morning.
It followed reports that an American, identified as John William Yeattaw, had managed to breach tight security to swim across Inya Lake and enter Ms Suu Kyi's house secretly on Sunday.
He was arrested after swimming back across the lake late on Tuesday.
Such an incident would be the first time someone has broken into Ms Suu Kyi's compound.